13 Mei : Fanoherana ala-bato -
AccueilRaharaham-pirenena13 Mei : Fanoherana ala-bato
Noporofoin’ ireo mpanohana an’i Marc Ravalomanana fa tsy azo hahodikodina ny safidin’izy ireo, antony nahatongavan’ny fahatongavana maro nandritra ny hetsika ny asabotsy teo teny amin’ ny parvis ny lapan’ ny tanana. Raha ny zava-nisy teny an-toerana dia tsy tafiditra anatin’ ny fefin’ny parvis Analakely avokoa ireo mpanohana ny K25, fa voatery nihaino kabary teny ivelany ny sasany.
Nizotra araka ny tokony ho izy ary tsy voahelingelina anefa ny fifamoivozana na dia teo aza izay fahamaroan’ ny olona izay, hita mihintsy fa mihaina anatin’ ny fanarahan-dalàna ny zanak’i dada. Raha ny fanazavan’ ny olona tonga teny an-toerana, dia ny fiarovan’izy ireo ny safidiny no antony nahatongavany teny an-toerana. Misy amin’ izy ireo aza no avy lavitra, saingy tsy nahasakana azy ireo izany noho ny maha zava-dehibe izay safidy izay.
Teny ampiandohan’ ny hetsika dia nosakanan’ny mpitandron’ ny filaminana ny toerana manoloana ny lapiazo ny lapan ‘ny tanana, nisy mihintsy ny rindrin’olona natsangana ary taorian’ izay ny fiaran’ireo mpitandron’ ny filaminana. Voatery nandamina izany anefa ny mpitarika ny hetsika teny an-toerana nahitana an’dry Hanitra Razafimanantsoa, ary nifampiresaka tamin’ ny mpitandron’ ny filaminana. Taorian’ ny fifampiresahana dia nanaiky niala ihany ireo mpitandron’ ny filaminana, ary ireo mpiambina sivily no nisehatra tamin’ ny fandaminana sy fandrindrana ny fandriam-pahalemana. Noporofoin’ ny zanak’i dada ihany koa fa endry izy ireo, ary tsy mila romoromo. Fehiny nilamina ny hetsika teny an-teorana ary lavitry ny korontana izay ninihana nahely sy naparitaka.
Hitohy tsy ankijanona mandra-pivoakan’ ny marina ny hetsika izay tanterahin’ ireo vahoaka mpomban’ny kandidà Ravalomanana Marc, nambaran’ ny mpisolo vava Hanitra Razafimanantsoa fa “hitohy hatrany ny hetsika hampahafantarana ny vahoaka ireo ala-bato nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo » hoy izy. Izany hoe hitsahatra ny hetsika mandritra ny fetin’ ny faran’ny taona, ary hitohy indray izany ny faha-2 ny volana desambra ho avy izao. Hisy ihany koa ny fanavazaona entina mandritra ny hetsika amin’ny taona ho avy io , izay hitondrana solaitra elektronika goavana hampisehoana sy hanazavana ny fomba nataon’ ny kandidà mpifanandrina tamin’ ny Marc Ravalomanana tamin’ ny ala-bato. Isan’ny nandray fitenenana teny amin’ ny kianjan’ny 13 mei ihany koa i Fanirisoa Ernaivo, izay nanipy hafatra tamin’ ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana fa tsy tokony ataon’ izy ireo ambanin-javatra ny fitoriana napetraka. Ihankinan’ny fiainam-pirenena ny raharaham-pifidianana hoy izy, ka sao indray adalain’ny HCC amin’ ilay fomba fiteny hoe azo raisina fa tsy mitombina ny fitoriana. Ankoatra izay dia nambaran’i Fanirisoa Ernaivo ihany, fa safidim-bahoaka no voahodikodina ary sarotiny ny rehetra ka tsy tokony ho lalaovina